Orinasa fanadiovana - Mpanamboatra fitaovana fanadiovana any Sina, mpamatsy
24L / 32L Side press press trollley tokana --H0101 / H0102
Nopetehin'ny paompy nentin-tanana ny rano, mavesatra sy mafy mihetsika ihany koa ny siny, maloto sy reraka. Ny trolley wringer dia afaka mamintina ny rano maloto amin'ny alàlan'ny fanindriana, mandroso mora foana ny casters. Io dia mamela ny madio ho mora kokoa.
Ny asa fitandroana ny fahadiovan'ny orinasanao dia tsy asa tsotra fa ny fampiasana ny siny paoketra mahitsy no hahamora kokoa azy. Na manana orinasa kely ianao na andrim-panjakana lehibe, dia ilaina ny fampitomboana ny zava-drehetra manomboka amin'ny fanadiovana isan'andro ka hatramin'ny korontana tsy ampoizina.
24L / 32L Down press press wrolley tokana –H0102 H0104
Ny trolley wringer kely sy mety, fampiasana marobe, toy ny trano, atrikasa, trano fitehirizana, ivon-toeran-dàlana, fivarotana lehibe sns., Mety amin'ny tany rehetra.
Vita amin'ny plastika grady avo lenta izy io. Satria matevina, porofo manaporitra ny paosy. Manamora ny fanadiovana ny amboniny malama. Ny kodiarana dia vita amin'ny fingotra madio, mamela mora mihetsika tsy misy tabataba ary tsy mamela lalan-kaleha amin'ny karipetra.
34L / 46L Down press press roa wringer trolley-H0203 / H0204
Ny loha fanondrahana rano nohamafisina dia ny fanamainana manindry dia vita amin'ny vy tsara, mamela ny fampiasana lava. Tsy mihena ny elastika. Ny lohataona tsy vaky. Ny tantana vita amin'ny plastika vita amin'ny famafazana dia porofon'ny fanatanjahantena. Ny vokatra dia tsara indrindra amin'ireo vokatra isan-karazany.
Fanadiovana Wax Barrel B042
Ny boaty fitehirizana tànana dia afaka mitahiry fitaovana, kojakoja fanadiovana, kojakoja ara-pahasalamana, kojakoja kanto.
Fanadiovana Caddy B041
Ento miaraka aminao ity kojakoja fanadiovanao rehetra ity, famonoana otrikaretina, fitaovana, na kojakojam-pitsaboana miaraka amin'ity Kardy Twin Tote ity. Paosy roa lalina sy lehibe no manome tahiry be dia be ho an'ny fanadiovana sy kojakoja fanadiovana, eny fa na ny entana madinidinika aza tsy very. T
Ny paosy be loatra dia afaka mitazona kojakoja fanadiovana na fitaovana enti-miasa